Carmo: Dad Ku Sumoobay Caano Sumaysan Oo Ay Cabeen – Heemaal News Network
Ugu yaraan Afartan iyo shan qof ayaa la dhigay Isbitaalka degmada Carmo ee Gobolka Bari kaddib markii ay cabeen caano sumeysan, sida dhaqaatiirta ay xaqiijiyeen.
Dadka caanaha ku sumoobay waxa ay isugu jiraan haween iyo carruur, waxaana ka mid ah laba haween ah oo uur leh.
Ma jirto cid ku dhimatay, dhacdadan oo ka dhacday deegaanka Ceel Daahir oo hoostagga Degmada Carmo ee Gobolka Bari.
Faadumo Cabdullahi Cadde oo ka mid ah mas’uuliyiinta Isbitaalka degmada Carmo ee Gobolka Bari ayaa sheegtay in ay inta badan la tacaaleen dadka bukaannada ah ee caanaha ku sumoobay.
Faadumo waxa ay sheegtay in caanaha lagu sumoobay ay ku jireen caagado lagu soo shubay, kaddibna dadka sidaas ku cabeen.
Faadumo Cabdullahi ayaa sheegtay in Magaalada Carmo ay ka billaabeen wacyi gelin la xiriirta in aan la cabin caanaha lagu shubo caagadaha,iyada oo sheegtay in waxyeellada ugu badan ay ka dhasheen caanaha caagadaha ku jira.
Maamulka Puntland Oo Wacad ku Maray Dagaal ka Dhan ah Ciidanka Somaliland.
Guddiga Amniga dowlad goboleedka Puntland ayaa kulan ay maanta ku yeesheen Magaalada Garowe waxay ku iclaamiyeen dagaal ka dhan ah ciidamada Somaliland. War uu soo saaray Guddiga Amniga Puntland ayuu ku sheegay inaysan qaadeynin wax […]
Warsaxaafadeed Laga soo Saaray Kulanka Golaha Wasiirada Puntland.(Akhriso)
Shirka Golaha Wasiirada Puntland oo uu shir gudoominayey Madaxweyne Dr.Cabdiweli Maxamad cali Gaas ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ka mid tahay xaaladda deegaanka Tukaraq. Sidoo kale shirka Golaha Wasiirada Puntland ayaa looga hadlay […]
C/wali Gaas Oo Madaxda Dowlad Goboleedyada Iskugu yeeray Shir Deg deg ah.(Akhriso)
Madaxda golaha iskaashiga dowlad Goboleedyada Somalia ayaa shir ku yeelanaya magaalada Kismaayo, iyadoo uu shirkaasi isugu yeeray guddoomiyaha golahaasi oo ah Madaxweynaha Puntland C/weli Maxamed Cali (Gaas). Qoraal kasoo baxay Madaxweynaha Puntland oo guddoomiya golahaasi […]